Trump Oo Ka Baqay Kim Jong-un Marakiibtisii Dagaalkana U Jiheeyey Australia – Heemaal News Network
HomeWararka Af SoomaligaCaalamkaTrump Oo Ka Baqay Kim Jong-un Marakiibtisii Dagaalkana U Jiheeyey Australia
Trump Oo Ka Baqay Kim Jong-un Marakiibtisii Dagaalkana U Jiheeyey Australia
Waxaa soo baxayo warar sheegaya in maraakiibtaasi dagaal ay aadeen dhinac kale oo ka duwan meeshii uu sheegay Donald Trump.
Ciidamada badda ee Mareykanka waxay sideedii bishan sheegeen in ay u jiheysteen dhanka gacanka Kuuriya, si Kuuriyada Woqooyi ay cadaadis u saaraan.
Isbuucii tagay, madaxweyne Trump wuxuu sheegay in ciidamadooda loo yaqaano ‘armada’ uu u diray Kuuriyda Woqooyi.
Laakiin Waxaa lagu warramayaa in maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ay aadeen dhanka Sunda ee badweynta Hindiya.
Mareykanka hadda wuxuu sheegayaa in marka hore ay tababar la soo sameyn doonaan ciidamada Australia.
Militariga hadda waxay u sii socodaan dhanka Galbeedka badda Pacific-ga, sida lagu amray. Waxa sidaasi sheegay sarkaalka hogaaminayo.
Ma cadda in ay ulakac tahay ama khiyaano tahay in Mareykanka uu ka soo noqdo jihada North Korea.
Waxay noqon kartaa in ujeedada ay ahayd in la cabsi geliyo hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong-un.
Sidoo kale waxaa lagu tilmaami karaa isfahan la’aan dhexmartay ciidamada Mareykanka iyo Madaxweynahooda, sida uu sheegay weriye Stephen Evans.
Kuuriyada Woqooyi iyo Mareykanka ayay dood kulul dhexmartay dhowaan, sidoo kale dhaqdhaqaaqa ciidamada Mareykanka ayaa sare u qaaday shakiga ah in Mareykanka uu doonayo in uu dagaal billaabo.
Dhanka North Korea, waxay bilowday diyaarinta ciidamadeeda, waxayna sameeyeen dhoolatus ay ku soo bandhigeen awoodooda ciidan iyo midda hubka.
Waxay sidoo kale North Korea tijaabisay gantaal, taas oo u muuqatay in ay ugu jawaabeyso Mareykanka.
Talaadadii, Mareykanka wuxuu Kuuriyada Woqooyi ku eedeeyay iskudey ah “in colaad ay billaabato”, ayadoo xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka James Mattis uu tijaabada gantaalada ku sheegay mid taxadar la’aan ah.
Wuxuu Mattis sheegay in Mareykanka uu si dhow Shiinaha ugala shaqeynayo tallaabada laga qaadayo Kuuriyada Woqooyi.
Maamulka Pyongyang wuxuu sheegay in isbuuc kaste uu hal gantaal tijaabindoono, wuxuuna ku hanjabay “dagaal aan waxba la isula hari”, haddii Mareykanka uu duullaan qaado.
“Haddii Mareykanka uu qorsheynayo duullaan militari, waxaan uga jawaabi doonnaa nukliyer”, ayuu yiri ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee North Korea, Han Song-ryol.
North KoreaUnited State	English News	Syria conflict: US jet ‘downs Iranian-made drone	English News	Shabaab details last week’s deadly assault in northern Somalia	English News	Somali survivors tell of bloody restaurant siege by rebels	English News	Hargeisa To Join Air Arabia’s African Network	English News	FACT FILE: Climate change, food security, and adaptation	English News	‘There is no blockade… Qatar is free to go,’ says Saudi FM	English News	UAE expels Somali from Ramadan competition over Qatar row	English News	AFRICOM Imam Leads First Iftar Uith U.S., SNA Leaders	English News	Landlocked Ethiopia Eyes Role in DP World-Managed Somali Port	English News	Somalia’s president vows revenge on al Shabaab after deadly attack	PreviousGudoomiyihii Rugta Ganacsiga Galmudug Oo Xilkii Laga Qaaday
NextXildhibaanada Baarlamaanka Somalia Oo Meel Mariyay Habka Loo Marayo Buuxinta Kuraasta Ka Banaan Baarlamanka
Caalamka	Fadeexadii Ugu Waynayd Oo Uu Trump Faraha La Galay “Swedan Oo Uu Been Cad Oo Qaawan Ka Sheegay”	19th February 2017
Eeg Swedan Waxa Ka Dhacaya? Miyaad Rumaysan Kartaan? Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trumo ayaa ku difaacay go’aankii lagu joojiyay Qaxootiga ka imaanaya 7 dal oo ay Somaliya ay ka mid tahay .
Caalamka	Trump Oo La Taliyayaashiisa Kala Tashanay Sidii Ay U Bilaabi Lahaayeen Jirdil Uu Taageersan Yahay	26th January 2017
Madaxwaynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu aaminsan yahay jirdilka.
Caalamka	Iibsiga Hubka Casriga Ah Oo Kor U Kacay, Wadamada Khaliijka Oo Aad Isku Hubaynaaya	20th February 2017
Warbixin cusub ayaa sheegaysa in hadda uu meeshii ugu sareysay marayo ganacsiga hubka ee caalamiga ah, tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa.